SP-L07 350ml Bluetooth Ọkà Okwu App Control Smart WIFI Okpukpo Diffuser, China SP-L07 350ml Bluetooth Ọkà Okwu App Control Smart WIFI Okpukpo Diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-L07 350ml Bluetooth Ọkà Okwu App Control Smart WIFI Okpukpo Diffuser
Model Number: SP-L07
Kacha nta Order ibu: 100 A tụkwasịrị
Packaging Details: 18Pieces / katọn
Oge Mbuga ozi: 20-45 ụbọchị dabere na oke
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: 50% nkwụnye, nguzo 50% tupu nnyefe
350ml Bluetooth Ọkà Okwu App Control Smart WIFI Okpukpo Diffuser
Mee udiri mma na ndu gi
1.App Control: na-achịkwa ọrụ niile nke onye na-ekesa ya site na obere ekwentị APP "Hydrone". Mgbe etinyere iwu nke ọma, onye mgbasa ozi ga-agba ọsọ na-enweghị ekwentị APP na. Enweghị mkpa ịga na ngwaọrụ ahụ iji gbanwee ọrụ ahụ mana ị nwere ike ijikwa ngwa a na ekwentị gị ugbu a.
2.Bible Bluetooth Ọkà okwu Player: Ọ nwere ike jikọọ na ngwaọrụ Bluetooth dị ka smartphones, mbadamba na kọmputa na-enye iwu mma music. Gịnị bụ ihe karịrị mmanụ diffuser na a humidifier, na ngwaọrụ a, ọ na-atụmatụ music player / ọkà okwu na ị pụrụ ịnụ ụtọ okpukpo mmepụta si na ya ma na-arụ gị ọkacha mmasị music si ngwaọrụ.
3.Aromatherapy & Humification nchọpụta: Mkpa mmanụ na-ekesa dị mkpa nke nwere mmepụta alụlụ nke galọn 0.035 kwa ụbọchị. Emepụtara a-esi ísì ụtọ na ya mgbe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na gị na oge ezumike na-enyere gị aka zuru ike.
4.Safety: Ezubere ya na akpaaka-apụ ọrụ, onye mgbasa ahụ ga-akwụsị ịrụ ọrụ na-akpaghị aka mgbe mmiri gwụrụ, ma ọ bụ oge gafere.
5.Colorful Night Light: Ọ nwere yi Ikanam ọkụ. Ìhè nwere ike iji 7 agba. Ma ọ bụ, ọ nwere ike ịtọ otu agba agba.
6.Timer: Site na bọtịnụ "MIST", ịnwere ike ịtọ oge ngosiputa 5 oge 30 min, 60 min, 120 min, 180min na ịga n'ihu. N'oge oge 7-15 awa.
ndenye AC100V-240V 50 / 60Hz
mmepụta DC24V / 0.65A
ihe onwunwe ABS + PC + eyi
ìhè 7 acha ọkụ ọkụ
ngụ oge 30/60/120 / 180min / ON
Nhazi Φ14.3 * 17cm
unit ibu 660g
Ogo igbe agba 15 * 15 * 17.9cm
ngwugwu 18 iberibe / katoonu
Oke kaadionye 47 * 47 * 38cm
NW / katọn 12 kgs
GW / katọn 13 kgs
SP-G57 110ml Osisi Mkpa Egwu Mpempe isi Oroma Diffuser